Isikhunta ngezinyawo, izimpawu nezici sicabanga e nezesikhumba ingenye izifo ezivame kakhulu. Lihlobene nokubhekana ubuso ukulimala esikhunjeni. Izibalo uqinisekise ukuthi ukhunta unyawo libuhlungu ikakhulukazi amadoda. Abesifazane uhlushwa ke ingasaphathwa.
Siyini isizathu? Isizathu nje izitho zomzimba kodwa futhi neqiniso lokuthi, njengoba umthetho, abameleli ubulili namandla kukhona izicathulo avaliwe kuphela. Yini engalungile izicathulo avaliwe? Yebo, iqiniso lokuthi emoyeni ezinyaweni uthola kancane kakhulu - ke ikhuthaza ukukhula yemihlobo ehlukeneko amagciwane. Phawula futhi ukuthi izinyawo ujuluke kakhulu isichathule avaliwe. Kufanele kuqashelwe ukuthi abantu ezinhle amasosha omzimba unyawo ukhunta cishe bayibukele.
Isikhunta ngezinyawo zakhe, izimpawu zazo izincwadi esizifundayo, bese kuvela. Ngu izinkomba zayo zokuqala zihlanganisa ububomvu kancane futhi uyaxebuka kwesikhumba. Ukungakhululeki enkulu esiyitholayo isikhala phakathi iminwe yakho. Foot ukhunta, izimpawu zazo izincwadi esizifundayo, kungavuka ifomu ezinzima kakhulu. Lapho-ke esikhumbeni zingavela amabhamuza emikhulu. Futhi ivele imifantu isikhumba. Ukwephula ubuqotho isikhumba kubangela ukukhululwa uketshezi.
Lapho izimpawu zinzima, kukhona amathuba eqinile ukuthi isifo lizobuya, ngisho nangemva uke ilulame ngokuphelele.
Ngo ezifweni ezimbi kukhona umonakalo hhayi kuphela isikhumba kodwa futhi plate nail. Kulokhu, izinzipho abe umbala normal, uthole amafutha, ninamandla kakhulu. Ukwephuza ukwelashwa kungase kube ngenxa yokuthi izinyawo ukhunta, izimpawu zazo izincwadi esizifundayo, futhi uyokwelula kunoma nezinye izingxenye zemizimba lesiguli.
izimpawu ezivamile ngesikhathi ukhunta unyawo yilezi:
- kubhujiswa lesi isikhumba shashaza;
- uyaxebuka nokusasamba;
- ukulunywa, ukushiswa ezinzima;
- ukungakhululeki phakathi ekhuluma ngeminwe yakhe.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ukutheleleka interdigital iyona owande kakhulu ukhunta kuchazwe.
Lokhu ukutheleleka has izici ezilandelayo:
- uma kungase kuvele othize, kodwa iphunga idangele;
- ikhava phakathi kwezinzwane iba ezithambile, zondile futhi eliphaphathekile kakhulu. Ukuze touch kuba bushelelezi kakhulu;
- lapho ukutheleleka interdigital bangase bazibone ayimigodi ahlukahlukene esikhumbeni. Umbala wawo kwenzeka nge uyaxebuka aqhephukile, futhi;
- ukwelashwa kufanele kube ngesikhathi esifanele, njenganoma yikuphi angangena Endaweni ethintekile obenesifo. Kungaba kubuhlungu ngempela futhi ukhunta eziyingozi unyawo izikhathi ezimbalwa;
- ukutheleleka ekugcineni interdigital kwenza isikhumba obukhulu futhi obukhulu kakhulu. Ngemva kwalokho, (isikhumba) iqala ukuba ngokoqobo iba yingxenye yomhlabathi. Endabeni ka ukwelashwa ayilungile singenzeka nail izifo? Yini engase yenzeke kubo? Bangaze okuxekethile ngisho ewa;
- avame abathintekayo yiwona imilenze emibili ngesikhathi esisodwa.
Foot ukhunta, izimpawu zazo izincwadi esizifundayo, ingase futhi ehambisana ne-vesicular ukutheleleka fungal. Ezithathelana akuzona okungaka.
Lesifo livela ngokuzumayo futhi ngokuvamile eba ngokushesha okukhulu. Lapho-ke ngaphansi izindawo isikhumba ethintekile, kwenzeka kuzona ngokwazo okuyinto uketshezi. I amabhamuza lokuqala cishe njalo avele ngaso ngemuva unyawo. Ngaphansi ngokuvamile, angathungathwa esikhaleni interdigital, ku esithendeni, ngesikhathi kakhulu amathe. Ezimweni eziningi, lokhu ukutheleleka ibonakala ngemuva ukutheleleka kokuqala. On the isikhumba zikhona izindawo, phakathi lapho kungabonwa uyaxebuka. Lesifo nemithi esingafanele kungase futhi zibe virus.
Ngaphambi ukwelashwa, kutuswa ukuba kudokotela. ejenti Antifungal ukudayisa eziningi, kodwa akuwona wonke umuhle futhi siphumelele ngempela. Odokotela bavame linqume izidakamizwa ngokuthi "Lysol" - eside umise ngokwaso njengoba kwezindlela ezikahle kwezinhlobo eziningi ukhunta senyawo. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi kuphela udokotela abanolwazi uzokwazi ukukhetha izidakamizwa ngempumelelo. Self-ukuxilongwa kanye nokwelashwa okungalungile izinkinga kuphela Yiqiniso lesi sifo.
Kungani ubuso avele amnyama: i-okungenzeka kakhulu izimbangela
Norma kashukela kwabesifazane
Imbobo thoracic: isici
Ukunakekelwa Proper ngemva ukuqhakaza daffodils
Izidakamizwa "Biotin": umthengi ukubuyekezwa kanye ochwepheshe on isicelo
Lalolo hlanga yeSiberia. Inani labantu base-aseNtshonalanga Kapa kanye naseMpumalanga eSiberia
Kanjani ukubuyela umyeni wakhe nomkakhe, izindlela kanye namathiphu